Dhaqaalaha Sweden oo laga yaabo in uu soo xumaado | Somaliska
Dhaqaalaha Sweden ayaa laga yaabaa in uu soo xumaado iyadoo Wasiirka Dhaqaalaha Anders Borg uu hoos u dhigay saadaalintii koboca dhaqaalaha ee sanadka soo socda. Arintaan ayaa loo eedeeynayaa dhaqaalaha aduunka oo hoos u dhac ku yimid qaasatan suuqyada Yurub iyo mareykanka oo isbuucyadii ugu dambeeyay qasaare weyn soo gaartay.
Wasiirka dhaqaalaha ayaa sidoo kale ka dayrinaya suuqa shaqada iyadoo la filayo in sanadka soo socda ay siyaado tirada dadka shaqo la’aanta ah. Wasiirka ayaa sheegay in la doonayo in la yareeyo isticmaalka guud. Sweden ayaa ka mid ahayd sanadihii ugu dambeeyay wadamada dhaqaalahooda uu kor u kacayo iyadoo cabashada ka soo yeertay wasiirka dhaqaalaha ay saameyn ku yeelan karto guud ahaan bulshada.
Suuqyada lagu kala iibsado sheerarka shirkadaha ee Yurub iyo Maraykanka ayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxaa la soo daristay qasaare aad u weyn iyadoo bangiyo badan ay qarka u saaranyihiin in ay kacaan.
Waa arin ifafaalaheeda muuqdo , welibana Sweden Skandenevian-ka wadamada Ugu saamaynta badan ayay ka mid tahay .
Maxaa yeelay wadamadaan iyadaa Ugu Lacag Jaban , Shirkado , ama Shidaal bixiyana ma qabto , balse saas oo ay tahay waan dadaalaynaa , Xagla Laaban Xoola Laguma helo , yaanan la is oran dhaqalaa dhacay , qo walba Qadarkiisa waa helaa . ee Hala dadaalo.
Dadkaana marka sidaan dhaqaalahooda u dhaco , Cunsuriga ayay ugu shubaan , sababtuna waa iyagoo inaga nagu Tebaa Dhaqaala Dhuuqa…..
August 27, 2011 at 18:34
Inshallah khayr, qof kasta arsaaqdisa ilaahy ba haya.Inagu hadaynu muslin nahay, waxaynu leenahy wax ninka gaalka ka maqan taasina wa imaanka iyo ilaahyo isku xirno.Alxamdulilah rabi al caalimin.